न्यूजिल्याण्डको जितका ‘नायक’ जेमिसनबारे कस्तो भन्छन् विराट?
By क्रिकेट पाटी	 On असार १०, २०७८
काठमाडौं- काइल जेमिसनले न्यूजिल्याण्डलाई टेष्ट च्याम्पियनशिपको उपाधि दिलाउन अहम् भूमिका खेले । उनले दुई पारीमा उत्कृष्ट इकोनमीका साथ ७ विकेट लिए ।
जेमिसनले पहिलो पारीमा २२ ओभरमा १२ मेडनसहित ३१ रन दिएर महत्वपूर्ण ५ विकेट हात पारे ।
दोस्रो पारीमा पनि जेमिसनले सोही लयलाई दोहोर्‍याए । उनले दोस्रो इनिङ्समा २४ ओभरमा १० मेडनसहित ३० रन दिएर महत्वपूर्ण दुई विकेट लिए । टिमलाई उपाधि दिलाउन ‘नायक’ सावित भएका जेमिसन ‘म्यान अफ द म्याच’समेत चुनिए ।
उनको प्रदर्शनको अहिले चौतर्फ चर्चा छ । जेमिसनको प्रदर्शनबारे भारतीय टिमका कप्तान विराट कोहलीले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् । फाइनल म्याच सकिएपछि फ्रेस कन्फरेन्सका क्रममा उनले जेसिमनको प्रदर्शन प्रशंसा नै गरे ।
विराटले जेमिसनले बलिङ र ब्याटिङबाट टिमलाई महत्वपूर्ण योगदान दिएको भन्दै उनको प्रशंसा गरेका हुन् । जबकि उनले फाइनल म्याचको दुवै पारीमा विराटलाई आउट गरेका थिए ।
आईपीएलमा जेमिसन पनि विराटले कप्तानी गरिरहेको रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोर (आरसीबी)मा छन् । उनलाई आईपीएल २०२१ का लागि आरसीबीले साढे १५ करोड भारुमा टिममा अनुबन्ध गरेको थियो ।
जेसिमनले आईपीएल २०२१ मा ७ म्याच खेल्दा ९.२० को इकोनमीमा ९ विकेट लिएका छन् । उनले ब्याटिङबाट ५ इनिङ्समा ५९ रन बनाएका छन् ।
जितपछि के भन्छन् विलियमसन?
भारतलाई हराउँदै विश्व टेष्ट च्याम्पियनशिपको उपाधि जितेपछि न्यूजिल्याण्डका कप्तान केन विलियम्सनले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले यो सुन्दर दृश्यलाई विशेष भन्दै सबैले यसलाई लामो समयसम्म याद गर्ने बताए ।
उनले भारतीय टीमलाई एक मजबुद टीमको रूपमा वर्णन गरे । विलियम्सनले न्यूजिल्याण्डको जितमा सबै खेलाडीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।
उनले म्याच सकिएपछि प्रेस कन्फरेन्समा भने, ‘यो एक विशेष दिन हो। म विराट र भारतीय टीमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । हाम्रो टीमले खेलेको खेल तारिफ योग्य थियो ।’
पहिलो पहिलो पटक आफूहरूले उपाधि जितेको उनको भनाइ छ । खेल जिताउन २२ खेलाडीहरू सबै प्रशंसनीय रहेको उनले बताए ।
‘यो लामो समयसम्म सम्झिने छौं। भारतीय पक्ष प्रत्येक परिस्थितिमा कत्तिको बलियो छ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भयो,’ उनले भने।
‘फाइनल एक सुन्दर खेल हो । ६ दिनसम्म कसले जित्छ भन्ने थाहा थिएन। र, म खुसी छु, किनकि हामीले खेल जित्यौं । यो पहिलो पारीमा जान पक्कै गाह्रो थियो। तल्लो अर्डरले अधिक स्वतन्त्रताका साथ खेले,’ किवी कप्तानले भने ।
उनले रस टेलरको प्रशंसासमेत गरे ।
टेलरले जटिल परिस्थितिहरूमा पनि स्पष्ट, अनुभव र शान्तीका साथ खेलेको उनी बताउँछन् ।
न्यूजिल्याण्डले दोस्रो इनिङ्समा ४४ रनमा दोस्रो विकेट गुमाएपछि विलियम्सन र टेलरले राम्रो ब्याटिङ गरे ।
विलियम्सन र टेलरले उत्कृष्ट पारी खेल्दै न्यूजिल्याण्डलाई उपाधि दिलाए ।
पहिलो इनिङ्समा अर्धशतक बनाउन चुकेका उनी दोस्रो पारीमा भने ५२ रनमा अविजित रहे ।
टोलीलाई जित दिलाउन टेलरले टेलरले नटआउट ४७ रन बनाए । न्यूजिल्याण्डले भारतलाई आठ विकेटले हराउँदै टेष्ट च्याम्पियनशिपको उपाधि हात पारेको हो ।
हारपछि विराटको प्रतिक्रिया
विराटले न्यूजिल्याण्डका बलरको उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दा आफ्नो टिम पराजित भएको प्रतिक्रिया दिए । साथै, उनले आफूहरूको रणनीतिले काम नगर्दा पनि पराजित हुन पुगेको बताए ।
‘न्यूजिल्याण्डले म्याच अवधिभर नै भारतमाथि दबाब राख्न सफल भयो । उसले राम्रो क्रिकेट खेल्यो । म्याचको दोस्रो दिन बलरलाई गति प्राप्त गर्न निकै मुश्किल थियो । तथापि पहिलो पारीमा बलिङमार्फत राम्रो प्रदर्शन गरेका थियौँ,’ विराटले म्याच सकिएपछि प्रेस कन्फरेन्समा भने, ‘खेलको अन्तिम दिन (बुधबार) भारतको पक्षमा रहेन । अन्तिम दिन न्यूजिल्याण्डका बलरको रणनीति सफल भयो ।’
विराटले आफ्नो टिमले ३०/४० रन बढी बनाएको भए म्याच जे पनि हुन सक्ने बताए । उनले भने, ‘हामी उनीहरूलाई राम्रो लक्ष्य दिनुअघि ३०/४० रनले पछि थियौँ । ३०/४० रन बढी बनाउन सकेको भए म्याच जे पनि हुन सक्थ्यो ।’
प्लेइङ-११ को अग्रिम घोषणा गरेकोमा आफूलाई दुःख नलागेको विराटको भनाइ छ । ‘टोलीमा एक अलराउन्डर चाहिन्छ, हामीले सर्वसम्मतिले निर्णय गर्यौँ । र, प्लेइङ-११ को घोषणा गरेका हैँ,’ उनले भने ।
काइल जेमिसनटेष्ट च्याम्पियनशिप
सुदूरपश्चिममाथि लुम्बिनीको ऐतिहासिक जित, जित्यो यू–१९ प्रतियोगिताको उपाधि
बागमतीमाथि सुदूरपश्चिमको ऐतिहासिक जित, पुग्यो प्रतियोगिताको फाइनलमा
यू–१९ क्रिकेटमा चम्किँदै अर्जुन साउँद, सुदूरपश्चिमलाई दिलाए रोमाञ्चक जित
कमलको घातक बलिङमा प्रदेश–२ माथि गण्डकीको शानदार जित
सुदूरपश्चिममाथि लुम्बिनीको ऐतिहासिक जित, जित्यो यू–१९ प्रतियोगिताको…
यी हुन् आईपीएलमा ‘रिटेन’ हुने ८ टोलीका २७ खेलाडी
यू–१९ क्रिकेटमा चम्किँदै अर्जुन साउँद, सुदूरपश्चिमलाई दिलाए रोमाञ्चक…
यूएईसँग नेपालका हार्नुका कारण
यू–१९ प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिमको ऐतिहासिक जित
नेपाली क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षकमा मोन्टी देसाईको सम्भावना कति? यस्तो छ…
नेपालसहित १६ टोली टी-२० विश्वकप २०२२ को ‘ग्लोबल क्वालिफायर’ मा
दक्षिण अफ्रिकाका यी बलर : जसले एकै पारीमा लिए १० विकेट
© 2021 - Cricket Pati. All Rights Reserved.